Xaaf Oo Ku Eedeeyay Dowladda Dhexe Inay Is Hortaag Ku Samaysay Safarkiisa Cadaado, Kuna Xayirtay Somaliland+Daawo – Hornafrik Media Network
Madaxwaynaha Dowlad Goboleedka Galmudug, Axmad Ducaale Geelle Xaaf oo soo gaaray Magaaladda Cadaado ayaa ku eedeeyay Dowladda Dhexe ee Somalia inay ku xanibtay Diyaaraddii Waday isaga Hargayso, Isla markaana Muddo ku dhow 6 Saacadood laga hortaagnaa inuu u soo kicitimo Cadaado.
Xaaf waxa uu sheegay in Dowladda Dhexe ay faragalin ku hayso Arrimaha Gudaha Galmudug, Isla markaana ay doonayso inay bur buriso Maamulka uu Madaxda ka yahay, isagoo ka digay kuwa uu sheegay inay soo dirtay, iyo kuwa ay soo diri doonaan. Wuxuuna Ashtako ku saabsan faragalinta lagu hayo Galmudug u diray Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka Somalia, Beesha Caalamka, iyo Qaramadda Midoobay.
Madaxwayne Xaaf waxa uu ka soo duulay Wadanka Isu Tagga Imaaraadka, isagoona ka weecday inuu soo maro Magaaladda Muqdisho, Waxaana uu taa badalkeeda marin ka soo dhigtay Hargayso.
HornAfrik waxay ogaatay in Dowladda Federaalka Somalia ay la xiriirtay Wasiirka Duulista Hawadda Somaliland, Farxaan Haybe, kaasoo lagu qanciyay inuu hakiyo Diyaaradda waday Xaaf inaysan u soo baqoolin Galmudug, balse markii uu waqti ku xayirnaa Xaaf Gudaha Garoonka Hargayso ayuu la xiriiray Madaxtooyadda Somaliland, kadibna waxa uu Madaxwayne Siilaanyo amray in la fasaxo Diyaaradda wada Madaxwaynaha Galmudug si ay u sii wadato Safarkeeda Cadaado.
Madaxwaynaha Xaaf waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay Siyaasiyiinta Koonfurta Soomaaliya ee Xiriirka la leh Maamulka Somaliland oo sheegta inay ka go’een Soomaaliya inteeda kale.
Dowladda Federaalka ah ee Somalia ayaan illaa iyo hadda ka jawaabin Eedeynta Galmudug.
Halkan ka daawo Shirka Jaraa’id ee Madaxwayne Xaaf oo aad u caraysan